Donald Trump oo magaalada Qudus u magacaabay Caasimadda Maamulka Israel -
Donald Trump oo magaalada Qudus u magacaabay Caasimadda Maamulka Israel
Madaxweynaha Dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku dhawaaqay in magaalada Qudus ee dhulka Falastiin ay tahay caasimadda maamulka dalka Israel ka dib hadal uu ka jeediyay aqalka Cad ee Mareykanka.
Donald Trump ayaa waxaa uu intaas ku daray in ujeedada uu sidan usameeyay ay tahay nabad ku soo dabaalida Bariga dhexe.
Waxaa uu intaas warkiisa raaciyay in Safaaradda mareykanka laga soo rarayo Magaalada Tel Aviv loona soo rari doono Magaalada Qudus.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa uu saxiixay warqad uu ku cadeynayo in Qudus ay tahay caasimadda maamulka dalka Yahuudda.
Dhinaca kale af hayeen uhadlay Dowlada Dulman ee Falastiin waxaa uu sheegay in loo aayi doono warka Donald Trump sidoo kale waxaa arinkan ka hadlay madaxda carabta iyo madaxweynaha dalka Turkiga oo iyaguna shaaciyay in Donald Trump uu ka laabto go’aankan, laakiin dheg looma dhigin oo Donald Trump wuu saxiixay warqadii magaalada Qudus uu ku siiyay Yahuudda.
Related Items:Donald Trump oo Magaalada Qudus Umagacaabay Caasimadda Maamulka Yahuuda, Featured
Dhulgariir dhimasho sababay oo ka dhacay xuduudka labadda dal ee Iran iyo Iraq